An’arivony ireo Hazomirary Sokitry Ny Japoney Iray no Lasa Hita Aty Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2017 11:21 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, عربي, Español, Italiano, English
Antsipirihany avy amin”ilay Fujiwara Hidesato Mpiady Nanohitra ny Centipede Goavambe” nataon'ilay artista mpanao sary hazomirary Katsukawa, Shuntei, 1770-1820. Angano malaza mitondra lohateny hoe “My Lord Bag of Rice” no aingam-panahy nitsirian'ilay sary hazomirary, angano ahitàna ireo mpiady miady aminà orita gaovambe iray teo akaikin'ny tetezana Seta ao amin'ny Farihy Biwa Japàna. Fampiresahana ny sary niarahana tamin'i Matt Alt sy Matthew Penney.
Ny rakitahiry ety anaty aterineto an'ilay Sampana Sary hazomirary sy Saripika ao amin'ilay Tranomboky dia manangona sy mitahiry ireo sary hazomirary sy saripika manaraka fomba fanao artistika roa, Ukiyo-e sy Yokohama-e avy amin'ny vanimpotoana Edo (1600-1868) sy Meiji (1868-1912).
Afaka jerena manontolo ato ilay rakitahiry.
Araka ny voalazan'ny Tranombokin'ny Kaongresy, tsy misy fameperana fantatra momba io rakitahiry io, ary omena alàlana ny fampiasàna azy “ara-drariny “.